Myanmar Arts & News Media: Photo News
Myanmar Arts & News Media
မြန်မာ့ အနုပညာနှင့် သတင်း မီဒီယာ
ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွေး (ခ) ဗိုလ်ချုပ် စောလာပွယ် မြိုင်ကြီးငူ ဆရာတော် တော် နှင့်
ဆေးမှုး ဒုဗိုလ်မှုးကြီး စောအာနိုး
MSDN မြန်မာ့လူမှုဘ၀ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကွန်ယက် မှ ကိုနေမျိုးဇင် ကိုနေမျိုးဇင် ၊ စောFreedom နှင့် ကိုအေးကျော်
သတင်းထောက်များ မေးကြားခြင်းအား ပြန်လည်ဖြေကြားနေစဉ်
သီချင်းများ နားထောင်လိုပါလျှင် -
The Ants - နှံကောင်လေး ...
ချစ်သူတွေ ရေးတဲ့ မှတ်တမ်း - For Valentine's Day
တို့ရဲ့ ချစ်သူများနေ့ - For Valentine's Day
နီနီခင်ဇော် - မာရီယို
အစိမ်းရောင် ရက်စွဲများ - ထူးအိမ်သင်
အမေသီချင်းများ - ထူးအိမ်သင်
စောင့်နေတဲ့ ချစ်သူများ - For Valentine's Day
ဇော်ဝင်းထွဋ် - လူ
ဇောဝင်းထွဋ် - ရာဇ၀င်
ယနေ့ မြန်မာရက်စွဲမြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခုနှစ် တပေါင်း လဆန်း ၇ ရက်
၁၂-၂-၂ဝ၁၃ ရက်နေ့ ၁၆၃၅ အချိန် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖြူးမြို့နယ် ဇေယျဝတီရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ဇေယျဝတီတိုက်နယ်ဆေးရုံမှ ဒေါက်တာ ဇော်သိန...
မောင် ယုံလား နှစ်ယောက်မရှိဘူး... မေဆွိ၊ဟေမာနေ၀င်း၊ထွန်းအိန္ဒြာဗို .. SHOW ပွဲ မိတ်ဆက်
နာမည်ကြီး အမျိုးသမီး တေးသံရှင်များဖြစ်သော မေဆွိ ၊ ဟေမာနေ၀င်း နှင့် ထွန်းအိန္ဒြာဗို တို့၏ နာမည်ကျော်သီချင်းများကိ...
အမျိုးသမီးများ ရင်သားအလှ မထိခိုက်စေရန် Photo Internet ရင်သားဆိုတာ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အလှအပကိုဖော်ဆောင်ပေးတဲ့ အရာပါ။ မိန်းကလေး တစ်ယောက် ကြည့်ကောင်း တယ်လို့...
Valentine Day တွင် တန်ဖိုးထားရမည့် အပျိုစင် ဘဝဆိုင်ရာ ပညာပေး လက်ကမ်း စာစောင် များ ဝေမည်
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက် ချစ်သူ များနေ့တွင် လိင်ဆက်ဆံရာမှ ကူးစက်နိုင်သော ရောဂါများနှင့် တန်ဖိုးထားရမည့် အပျိုစင် ဘဝဆိုင်ရာ ပညာပေ...
Hot & Sexy Celebrities at SOE THU's Concert ... !!!
နေရွှေသွေးအောင် ၊ Miss Universe Myanmar , မိုးစက်ဝိုင် တို့နဲ့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ (MYANMAR ) UNIVERSITIES CHAMPION LEAGUE ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား
ချစ်သူများနေ့ ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းအစ ...VALANTINE's DAY
ရောမအင်ပါယာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အေဒီ၂၀၀ ကျော်ကာလက ဖြစ်ပြီး ရောမစစ်ဘုရင်တို့ သွေးဆူနေချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တိုက်ဖို့သာ အချိန်တိုင်းေ...
မြန်မာ့အလှမယ် နန်းခင်ဇေယျာ အား ပုံတူ ပန်းပု ပန်းချီ ထုလုပ် ရေးဆွဲကြမည်။
အ ပြည်သူ့အချစ်တော် မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ပအို့တိုင်းရင်းသူ အလှမယ် နန်းခင်ဇေယျာ၏ ပုံတူ အား ပန်းချီ ၊ ပန်းပု ရေးဆွဲထုလုပ်ကြမည် ဖြစ်ပါသောကြောင့်...
အဆို​တော်​ ချမ်းချမ်း ကိုယ်​တိုင်​ ​ပါဝင်​ သရုပ်​​ဆောင်​ သီဆိုထားပြီး နိုင်​ငံတကာအဆင့်​မီ Equipment များဖြင့် ပရိတ်​သတ်​များ အတွက်​ ထူြး...
ဂျာကင်တွေဝတ်ရတာ သဘောကျတဲ့ သရုပ်ဆောင်အဆိုတော် သို့မဟုတ် ... အကယ်ဒမီ Dr.စိုးသူ သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် စိုးသူ သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် စိုးသူမှ သီဆိုဖျော်ဖြေစဉ် သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် စိုးသူမှ သီဆိုဖျော်ဖြေစဉ် သရ...
Beer သောက်လျှင် ... သင်သိပါသလား ?
“ဘီယာဟာ အရက်တော့ မ ဟုတ်ပါ” ဆိုတဲ့သီချင်းလိုပဲ။အရက်မဟုတ် ဘူးလို့ အတင်း ဇွတ်ကန်ငြင်းပြီး လူတွေက ဘီယာ ကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် သောက်လာ ကြပါတယ်။ယောက်ျားလေး တွေသာမကဘဲ မိန်းကလေး တွေလည်း သောက်လာ ကြတာပါ။ အဲဒီလို ဖက်ရှင်လိုရော၊ သောက်ချင်လို့ ရောနဲ့ အကြောင်းအ မျိုးမျိုးနဲ့ သောက်ကြတဲ့ သူတွေဘီ ယာ အကြောင်း သိပါရဲ့လား။ ဘီယာ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်အချို့ ကိုပြောပြပါ့မယ်။Light (or) Lite ဘီယာမှာ ကယ်လိုရီ ၁၀၀ ထက်ပိုပါတယ်။ ပျမ်းမျှ ၁၂ အောင်စပဲရှိတဲ့ lite ဘီ ယာတိုင်းမှာ ကယ်လိုရီ ၁၀၀ က နေ ၁၃၀ အထိပါပါတယ်။ ရိုးရိုးဘီ ယာဆိုရင် ၁၅၀ ကနေ ၂၀၀ ကယ် လိုရီပါပါတယ်။ ရိုးရိုးဘီယာ နဲ့ lite ဘီယာက အနည်းဆုံး ကယ်လီုရီ ၂၀ ကနေ ၁၀၀ အထိ ကွာပါတယ်။ဘီယာက အဆီ ဓာတ်ကင်း တယ်။ ဘီယာက ၀ိုင်လိုပဲ အဆီဓာတ် ကင်းပါတယ်။ နောက်ပြီး အာဟာရ ဓာတ်အနည်းငယ် လည်းပါဝင်ပါ တယ်။ ဘာတွေလဲ ဆိုရင် ပရိုတင်း၊ ပိုတတ်ဆီယမ်၊ ဖောလစ်အက်ဆစ်၊ ဗီတာမင်ဘီ ၁၂ နဲ့ ဆီလီယမ် တွေ ပါ။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန်အမျိုး သား အစားအစာ ညွှန်ကြားမှုဌာ န ကတော့ ဘီယာဟာ ကယ်လိုရီ အများဆုံး အစားအစာငါးမျိုးမှာပါ ၀င်နေပြီးတော့ အာဟာရဓာတ်လုံးဝ မရှိ ဘူးလို့ ကြေညာ ထားပါတယ်။နေ့စဉ်ဘီယာသောက်လို့ရသလား ဘီယာကို နေ့စဉ် သောက်ရင် ကယ်လိုရီ ၃၀၀ ကနေ ၄၀၀ အထိရှိ လာတတ် လာမယ်။ ဒါက ဟမ်ဘာ ဂါစား တာရဲ့ နှစ်ဆ၊ ရိုစ့်ဆင်းဒ၀တ် နဲ့ ချိစ်ပီဇာနှစ်ခုစားသလောက်ကို တက်မှာပါ။ဘီယာမှာ အယ်လ်ကိုဟောဘယ်လိုပါဝင်လဲအယ်လ်ကိုဟောမှာ ကယ်လိုရီ ၇ ဂရမ်ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီတော့ အယ်လ်ကို ဟောများလေ ကယ်လိုရီ များ လေပါ။ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ ချချင်သူတွေကတော့ အယ်လ်ကို ဟောရော ဘီယာကိုပါရှောင်ရမှာပါ။အရောင်တွေက ဘယ်လိုကွာသလဲ ကယ်လိုရီဟာ အယ်လ်ကိုဟော ဘယ်လောက်ပါ သလဲ အပေါ်မှာမူ တည်တာပါ။ အရောင်အရင့်၊ အ ရောင် အနုပေါ်မှာ မူမတည် ပါဘူး။ အရောင်နုရင် ကယ်လိုရီ နည်းတာ လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ယောက်ျားတစ်ယောက်ဘီယာဘယ်လောက်သောက်ရမလဲ လုံးဝ မသောက်ရင်ကောင်းပေ မယ့် မသောက်ရ မနေနိုင်ဘူးဆိုရင် တော့ နှစ်ခွက် ထက်ပိုမသောက်သင့် ပါဘူး။ တစ်ခွက်က ၁၂ အောင်စ ထက် မပိုရပါဘူး။မိန်းမတွေကရောမိန်းမတွေက လည်းနေရာတကာ လိုက်ပြီး ရင်ပေါင်တန်း ချင်တယ်။ သောက်ချင်တယ်ဆိုရင် တစ်နေ့ကို တစ်ခွက်ထက် ပိုမသောက်သင့်ပါဘူး။ ၀ိုင်ဆိုရင် ငါးအောင်စ တစ်ခွက်ပဲ သောက်သင့်ပါတယ်။ဘာရောသောက်မလဲ ဘီယာကို ပေါ့အောင်ဆိုပြီး တခြားအရည်ရော သောက်ရင် ကယ် လိုရီပို တတ်ပါတယ်။ ကိုလာလိုအ ရည်မျိုးရော သောက်မိပြီဆိုရင် ကယ် လိုရီ ၁၅၀ ကနေ ၂၀၀ လောက် အထိ ပိုသွားမှာပါ။ဘီယာမသောက်လည်း ဗိုက်ပူတယ် တချို့ ယောက်ျားတွေက အ သက်ရ လာရင် ဘီယာ သောက်ပြီး ဘီယာဗိုက် ဖြစ်လာကြပါတယ်။ အ မှန် ကတော့ ဘီယာမ သောက်လည်း ကယ်လိုရီ များရင်ဗိုက်ပူ တတ်ပါတယ်။ကောင်းတာဘာရှိလဲ ဒီတော့ ဘီယာဆိုင် ထိုင်၊ ဘီ ယာသောက်ရင် ကောင်းတာဘာရှိ လဲ။ အပေါင်းအသင်း တိုးတယ်၊ လူ မှုရေး အကျိုးရတယ်လို့ အများက တော့ဆင်ခြေ ပေးကြပါတယ်။ နောက် တစ်ချက် ရှိပါသေးတယ်။ ရေများများ သောက်ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျောက် ကပ် ကျောက်တည်တာ ကိုတော့လျော့ ကျစေ တာပါပဲ။
အရက်သောက်လျှင် ... သင်သိပါသလား ?
တကယ့် ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ဆေးပညာ တွေ့ရှိချက် ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ် လည်းရေဒီယိုဓာတ် ရောင်ခြည်အဆိပ်သင့်မှုကို အရက်က ကာကလည်း ကာကွယ်ပေးသလို ပျောက်လည်းပျောက်ကင်းစေတယ် လို့ အမေရိကန် ဆေးပညာရှင်များက ၂၀၀၈ ခုနှစ်က တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။အရက်ရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ အယ်ကိုဟော ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ ဘီယာ၊ ဝိုင်၊ အရက်၊ ဗော့ကာ အစရှိသဖြင့် အမျိုးအစားအားလုံးက အထောက် အကူ ပြုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ယူကရိန်က နျူကလိယ စက်ရုံ ပေါက်ကွဲမှုမှ ရရှိတဲ့ သင်ခန်းစာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဝိုင်နီ သောက်ထားတဲ့ သူများက အဆိပ်သင့်မှု လျော့နည်းပြီး အချို့ ဆို လုံးဝကို အဆိပ်မသင့်ကို အံ့သြစွာ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဆေးပညာအရ ဒီလို ဖြစ်ပါတယ်။ရေဒီယိုဓာတ်ရောင်ခြည် ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ထိုးဖောက်ဝင်ပြီဆိုရင် ဆဲလ်တွေ ကို သေစေပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ DNA တွေကို ပုံစံပြောင်း ပျက်ဆီး စေပါ တယ်။ ရောဂါလက္ခဏာ အနေနဲ့ကတော့ မအီမသာ ဖြစ်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ဝန်းလျှော်ခြင်း တို့က ၂၄ နာရီအတွင်း ဖြစ်ပြီး ကင်ဆာ အစရှိတဲ့ ရောဂါများ က နောက်ဆက် တွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုးရွားဆုံးကတော့ သေစေတဲ့ အထိ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို အရက် (အယ်လ်ကိုဟော) က ကယ်နိုင်ပါ တယ်။အထက်ပါ ဓာတုအဆိပ်သင့်တဲ့အခါ ဆဲလ်တွေ ပျက်ဆီးဖို့ စပါတယ်။ ယင်း ပျက်ဆီးဖို့၊ ကွဲပြားဖို့ ဖြစ်လာတော့မယ် ဆဲလ်တွေကို ပုံမှန်အတိုင်း စုစည်းနေအောင်၊ ရေဒီယိုဓာတ်ကို ဖယ်ရှားနိုင်အောင် သွေးဆဲလ် တွင်း မော်လီကျူးတစ်မျိုးက အလုပ်လုပ် ပါတယ်။ ယင်း မော်လီကျူးကို သာမန်အခြေအနေမှာ ထုတ်လုပ်ဖို့ မလွယ်ကူပါတယ်။ တွန်းအားပေးဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။ သို့ပေမယ့် ယင်း မော်လီကျူးကို အယ်လ်ကိုဟောက ပါရှိ တဲ့ အော်ဂဲနစ်ဓာတ်များက တွန်းအားပေး အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။ အကျိုးဆက်ကတော့ အရက်သောက်ထားရင် ဓာတုရောင်ခြည်၊ ရေဒီ ယိုရောင်ခြည် အဆိပ်သင့်ဖို့ ခဲယဉ်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် အရက်သောက်ထားသူဟာ နျူကလိယစက်ရုံ ပေါက်ကွဲတဲ့၊ ပျက်ဆီးတဲ့ ဒေသမှာ အသက်ရှင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူတယ် လို့ တွေ့ရှိ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Google News for မြန်မာ
Aung Myo Myint . Simple template. Powered by Blogger.